Phinda uqambe Ithimba Lokuhlela | Iresiphi
I-Recetin iyi- iwebhusayithi mayelana nokupheka izindlela eziklanyelwe izingane. Inkinga ejwayelekile kakhulu komama abaningi kulapho kulungiswa imenyu yosuku ngalunye. Ngipheke ini namhlanje? Ngikwenza kanjani lokho izingane zami zidla imifino? Ngingayilungiselela kanjani ifayili le- ukudla okunomsoco nokunempilo kwezingane zami? Ukuphendula lowo mbuzo neminye eminingi, uRecetín wazalwa.
Zonke izindlela zokupheka kuwebhusayithi yethu zilungiselelwe abapheki abangochwepheshe kwezondli zezingane, ngakho-ke abazali banazo zonke iziqinisekiso ukulungiselela ikhishi elinempilo nelinempilo. Uma ufuna ukuba yingxenye yale webhusayithi futhi ushicilele izindlela zakho zokupheka nathi, kufanele nje gcwalisa ifomu elilandelayo futhi sizoxhumana nawe ngokushesha okukhulu.
Ngabe ufuna ukuthola iqembu lethu labapheki? Yebo, lapha sethula bobabili labo abayingxenye yeqembu ngalesi sikhathi kanye nalabo abake basebenzisana nathi esikhathini esedlule.
Ngineziqu ze-Advertising and Public Relations. Ngithanda ukupheka, ukuthatha izithombe futhi ngijabulele abancane bami abahlanu. NgoDisemba 2011 mina nomndeni wami sathuthela eParma (e-Italy). Lapha ngiqhubeka ngenza izitsha zaseSpain kepha ngiphinde ngilungise ukudla okujwayelekile okuvela kuleli. Ngiyethemba uyazithanda izitsha engizilungisayo ekhaya, ezakhelwe njalo ukujabulisa abancane.
Ngingumuntu othembekile ongenakuphikwa wasekhishini futhi ikakhulukazi we-confectionery. Ngichithe iminyaka eminingi nginikela ngengxenye yesikhathi sami ukulungiselela, ukutadisha nokujabulela izindlela zokupheka eziningi. Ngingumama wezingane ezimbili, nguthisha wokupheka wezingane futhi ngiyazithanda izithombe, ngakho-ke kwenza inhlanganisela enhle kakhulu ukulungiselela izitsha ezinhle kakhulu zeRecipe.
Ngiyazifela ngokupheka, futhi engikukhethayo kungama-dessert. Ngilungisa okumnandi, izingane ezingakwazi ukumelana nazo. Ngabe ufuna ukwazi izindlela zokupheka? Bese uzizwe ukhululekile ukungilandela.
Ngazalelwa e-Asturias ngo-1976. Ngiyisakhamuzi kancane somhlaba futhi ngiphatha izithombe, izikhumbuzo nezindlela zokupheka lapha nalaphaya ngiphethe ipotimende lami. Ngingowomndeni lapho izikhathi ezimnandi, ezinhle nezimbi, zembula itafula, ngakho-ke kusukela ngisemncane ikhishi belikhona empilweni yami. Ngalesi sizathu, ngilungisa izindlela zokupheka ukuze izingane zikhule ziphilile.
Igama lami ngingu-Irene, ngazalelwa eMadrid futhi nginenhlanhla enkulu yokuba ngumama wengane engiyithanda ngobuhlanya futhi ethanda ukudla, zama izitsha ezintsha nokunambitheka. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-10 ngibhala ngenkuthalo kumabhulogi ahlukahlukene e-gastronomic, phakathi kwawo, ngokungangabazeki, iThermorecetas.com evelele. Kuleli zwe lokubhuloga, ngithole indawo enhle engivumele ukuthi ngihlangane nabantu abakhulu futhi ngifunde izindlela zokupheka namasu angenakubalwa okwenza ukudla kwendodana yami kube ngcono kakhulu futhi sobabili sikujabulela ukulungiselela nokudla izitsha ezimnandi ndawonye.